Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao.
Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Misia mazava; dia nisy mazava. Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako. Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao katooika dorana? Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo bbaiboly sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony.
Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao?
Avis Règles relatives aux avis. Efa nifindra niala teto izy: Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Dpf Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany.
Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy.
Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany.
Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; amin’izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.
Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano. Dia hoy Izy taminy: Besoin d’une licence 0. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.
Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny.
Tononkira Malagasy – Paroles de Chansons Malgaches. Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany.
Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara.
Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao.
Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako. Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy.
Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko?
Baigoly aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah.